Madzimai Akupedzwa Nzara Yebonde Ne Gym Ne Mabasa- Vana Mazvikokota - HealthTimes
MUDZIMAI akagarisa asina kunzi tokonyo zvinogona kuvhiringa zvakwanda. Zvino kunze kwaita dambudziko, madzimai akawanda haachafarire bonde nekuda kwezvikonzero zvakwanda mazuva ano. Umwe Mazvikokota pane tsvakurudzo dzakaitwa anoti iye madzimai akupedzwa simba kugym, huye nekuita mabasa akawanda zvinosangasira anoita kuti vanete pfungwa zvese nemuviri.
Tsvakurudzo yakaitwa ku United Kingdom ye National Survey of Sexual Attitudes inoratidza kuti vanhu havachafadzane pabonde sezvaiitwa chinyakare. Sarudzo idzi dzakaona kuti mugore ra 1990, murume nemukadzi vaigona kuita bonde kshanu pa mwedzi, mugore ra 2000, vadikani vaiita bonde kana (4 times) tozoti muna 2010 zvairatidza kuti vanhu vaita bonde katatatu chaiko.
Kushaikwa kwe bonde kuri kukonzera kuti vanhu vagare vaka mudhura huye kunyika dzakaita sana United Kingdom, kushaikwa kwebonde kuri kukonzera kuti vanhu vakawanda varambane huye vamwe vashaye hope kana nguva dzekurara dzasvika yamunoti Insomnia pachirungu. Vamwe varikutora mapiritsi ehope kuti vawane kurara nekuti vakasadaro husiku hunopera vakarinda musha wese ziso rakavhurika kuti wodyo.
Vana mazvikokota kubva pa University ye Florida State vakataura ivo kuti bonde rakakosha chaizvo kumudzimai. Mudzimai asina nzara yebonde anogara akafara huye achinyemwerera. Mudzimai asina nzara yebonde ane inonzi pachiringu ‘afterglow’ kupenyerera ne kutsetseka kweganda kunogara kwe ma awa makumi mana nesere (48 hours) huye izvi zvinoita kuti vanhu vadananae chaizvo. Pasina iyi inonzi afterglow, vanhu vanoita distant. Kugara mese kasi muri kure nakure huye makangotsamwa.
Tsvakurudzo dzakaitwa dzinoratidza kuti zviuru makumi maviri munyika makumi maviri vari pamakore 16 zvichikwira havasi kufara pabonde. Tsvakurudzo dzakaitwa ne Kinsey Sex Institute, dzakaona kuti mudzimai anopihwa bonde ka pfumbamwe pamwedzi (9) anemufaro wakawanda kudarika mukadzi anowana bonde kana (4 times) pamwedzi.
Professor David Spiegelhalter, munyori we bhuku rinonzi Sex By Numbers: What Statistics Can Tell Us About Sexual Behaviour anoti iye kushaikwa kwebonde kuri kuwedzera stress kana kuti kushungurudzika muvanhu.
Vanamazvikokota vanoti ivo kudzikira kwemaitiro atinoita bonde kunogona kuchikonzerwa ne mararamiro atiri kuita mazuvano. Tine materevision huye takurara nguva dzapera nekuti tinenge tichiona machannels akawanda. Kare kwanga kusina izvi, vanhu vairara nguva dziripo zvinova izvo zvaipa vanhu nguva yakakwana yekudanana,” vakadaro Professor Spiegelhalter.
Vanoti zvekare nguva dzakare kusati kwava ne Netflix ne Wifi, nguva dzechando vanhu vaiziva kuti bonde ndorega raifanira kudziisa vanhu. Vakarorana vaiita mujawo kuenda muimba yekurara kunotamba Reggae.
“Madzimai emazuvao akushanda zvakanyanyisa kudarika madzimai akare. 67% yemadzimai vari pakati pemakore 12 kusvika 64 vari kumabasa huye vanoshanda pavhiki kwema awa makumi mana. Kana vadzoka kumba vanofanira kuita Mabasa epamba pamwe nekutamba nevana. Izvi zvinovapoedza simba zvekuti vanenge voda kurara hope chaidzo.”
Chiremba Geoff Hackett, nyanzvi mune zvemishonga kunyanya yepabonde ku Britain zvakare vaimbova ivo Chairman we British Society for Sexual Medicine, vanoti ivo vanhu vakaramba vachiita maitiro avari kuita mazuvo, bonde richapedzisira dzangove ngano.
“Mamiriro anga akaita dzimba kumakore ana 1950 aikurudzira kuti bonde riitwe zve pfofa pfofa. Mazuva ano, vanhu vari bishi kumhanyidzana nezvimwe zvakafanana nekutsvaga mari nekuita twakawanda wanda, Bonde riri munjodzi.
“Madzimai aneta, vari bishi kutarisana kurera vana, vamwewo simba riri kuperera ku ma gym uko kuri kuendwa zvakanyanya sezvo madzimai ari kudawo kufambidzana nenguva. Gym ikaitwa zvaknyanya nevanhu kadzi rinokanganisa ma hormes ropedza chishuwo chebonde,” vakadaro Chiremba Hacket.
Fitness/Workout, Health News, HealthTimes Vernacular, Relationshipsbonde